Iyo fuse inotakura inoumbwa nemakomba ekubata. Push bhatani, gadhi bhodhi uye mubato. Pane nzvimbo nhatu dzemakomba ekubata. yeNH000-NH00, NH0-NH3, uye mafiyasi eNH4.
Iyo inochinjika muchinjiko-chikamu fiyuzi chinhu chakagadzirwa nemucheka wesirivha machira akaiswa mucherechedzo muhuya hunonyungudika hwakagadzirwa epoxy girazi faibha inova inopisa kupisa. Iyo fiyuzi chubhu izere nemakemikari-anochengetwa akakwira-kuchena makwikwi seye arc-yekudzimisa svikiro, Iwo maviri magumo eiyo yakanyunguduka muviri akabatana kune (banga) vanobatana neine dot welding.
Fiyuzi zvichiongororwa namano
Yakagadzirwa nezvikamu zvinotevera: 1. Chinonyungudika chinonyungudika, 2. Micro switch (iine imwechete yakajairika kuonana uye imwechete yakasununguka kuvhura), 3. Hwaro hweanorova uye switch. Fiyuzi yekuongorora michina inowanzo fananidzwa pasi pechivharo chekusimbisa screws kumagumo eiyo fuse. Kana fiyuzi ikatyoka, pini inorova inobuda kunze kwemurova, iyo microswitch yakasunda uye chiratidzo chakatumirwa kunze kana dunhu rakatemwa. Ipapo chinhambwe pakati pemakona maviri ekumisikidza chinogona kuchinjika mune imwe nhanho yekufananidza nemafiyasi ane nharaunda dzakasiyana.